Hita Amin’ny Vaovao Indray i Michoacan, Fa Amin’ny Fetiben’ny Filma Efa Niomanana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Oktobra 2016 6:43 GMT
Afisy Ofisialin'ny Fetiben'ny Filma Morelia. Nalaina avy amin'ny habaka ofisialy.
Michoacán de Ocampo ao andrefan'i Meksika, no foiben-toeran'ny andiany faha-14 amin'ny Fetibe Iraisampirenen'ny filma Morelia (FICM), lanonana iray manintona ny mpankafy sy ny mpahafantatra ny “Zavakanto Fahafito”.
Iray amin'ireo fanjakana ao Meksika tratran'ny fahirano amin'ilay lazaina ho ady amin'ny fikambanan-jiolahy i Michoacan. Izy no nipoiran'ny vondrona mitam-piadiana iray antsoina hoe Mpiandry Tempoly sady faritra iray anjakazakan'ny tambajotra Los Viagras. Avy ao no nivoahan'ireo olo-malaza tahaka an'i Fausto Vallejo sy ny zanany [mg] izay manana anaram-bositra hoe “Gerber”. Saingy anio, tsy miresaka momba azy ireo ny vaovao avy ao Michoacan. Anio, mahafaly ny vaovao satria misy ny zavakanto izay mampifantoka ny maso hitodika any amin'io andian-javakanto io.
Ny tantaram-piainan'i “Neruda” tamin'ny fanenjehana ara-politika nahazo ilay poeta, mpanao lalàna sady diplaomaty shiliana Pablo Neruda no tetikasa misongadina voalohany amin'ity fetibe ity, araka ny notaterin'ny vavahadin-tserasera Proceso.
Ny filma ‘Neruda’, lalaovin'ilay meksikana Gael García Bernal, tontosain'ilay shiliana Pablo Larraín, no filma no nanoka-baravarana ny andiany faha-14 amin'ny Fetibe Iraisampirenen'ny Filma Morelia.
Nivoaka tamin'ny tapaky ny taona 2016 nandritra ny andian'ny faha-69 amin'ny Festival de Cannes, ao atsimon'i Frantsa ity filma ity.
Ao amin'ny Twitter, nilaza ity asa miavaka ity manokana i Gonzalo Lira:
Hitako fa Neruda no tsara indrindra amin'izay hitako ao amin'ny FICM2016, havoakan'i @CinepolisDist ao amin'ny @SaladeArtecine
Maneho hevitra tahaka izao manaraka izao ny mpisera tsy afa-manatrika tahaka an'i Yenni:
Malahelo tsy afaka mandeha any amin'ny FICM2016, misy afa-mitondra ahy ve?
Mampahatsiahy ny isan'ireo sanganasa meksikana haseho amin'ity fetibe Iraisampirenen'ny filma Morelia ity i Jose Arrieta:
FCM: RT TimeOutMexico : Indro ny FICM! hampiseho horonantsarimihetsika meksikana 14 amin'ny 106 hiseho amin'io fotoana io ity andiany faha-14 ity.
Nahazo ny fifantohan'ny maro ny sinema meksikana tao anatin'ny taona vitsivitsy farany izao, tamin'ny loka maro azony any amin'ny faritra maro eto amin'izao tontolo izao, indrindra fa ny tao Etazonia tamin'ny alalan'ny Akademia [mg] avy amin'ity firenena ity izay nahazoan'i Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñárritu ary i Emmanuel “El Chivo” Lubezki loka.
Tamin'ity taona ity dia manana vahiny nasaina manokana ny FICM tahaka ilay Frantsay Audrey Tautou sy ilay Amerikana Willem Dafoe. Azo jerena ao amin'ny pejy ofisialin'ny lanonana ireo olo-malaza maro hafa avy amin'ny tontolon'ny sinema, sy ireo ao anatin'ny fitsarana. Hita ao amin'ny kaonty Twitter @FICM ny antsipirihany.
ANIO: Lanonambe SULLY, notontosain'i Clint Eastwood.
Cinépolis Centro, Efitra 4, amin'ny valo ora sy sasany alina.
11 ora izayEl Salvador